Sample Company Medialọ Ọrụ Ntanetị Media | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 7, 2015 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
Mgbe na-eme nnyocha ụfọdụ na akwụkwọ ahụ, m mere gafee a magburu onwe obere goldmine si Mgbanwe Communications PR squared blog… a Top 10 Social Media Guidelines. Ha weputara ya ebe ahu ma choghi udiri ihe obula maka ahia.
Ntuziaka 10 kachasị maka Social Media Ikere na lọ Ọrụ]
Ntụziaka ndị a metụtara ndị ọrụ lọ ọrụ] ma ọ bụ ndị ọrụ ngo ndị mepụtara ma ọ bụ nye aka na blọọgụ, wikis, netwọkụ mmekọrịta, ụwa mebere, ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke Social Media. Ma ị banye na Twitter, Yelp, Wikipedia, Facebook ma ọ bụ Google+, ma ọ bụ kwuo okwu na blọọgụ mgbasa ozi n'ịntanetị, ụkpụrụ nduzi ndị a bụ maka gị.
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ [Companylọ ọrụ] niile nabatara isonye na Social Media, anyị na-atụ anya na onye ọ bụla na-ekere òkè na nkọwa ịntanetị ga-aghọta ma soro ntuziaka ndị a dị mfe ma dị mkpa. Iwu ndị a nwere ike daa ụda ma nwee obere okwu na-ada ụda iwu mana biko buru n'uche na ebumnuche anyị niile dị mfe: isonye n'ịntanetị n'ụzọ nkwanye ùgwù, mkpa dị mkpa nke na-echekwa aha anyị ma na-agbaso leta na mmụọ nke iwu .
Bụrụ uzo ma kwupụta na ị na-arụ ọrụ na [Company]. A ga-ahụta eziokwu gị na gburugburu ebe obibi Social Media. Ọ bụrụ na ị na-ede banyere lọ ọrụ] ma ọ bụ onye na-asọmpi, jiri ezigbo aha gị, chọpụta na ị na-arụ ọrụ maka [Companylọ ọrụ], ma doo anya banyere ọrụ gị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị n’ihe ị na-ekwu, buru ụzọ kwuo ya.
Etinyela onwe gị ma ọ bụ [Companylọ ọrụ] n'ụzọ ụgha ma ọ bụ nduhie. Nkwupụta niile ga-abụrịrị eziokwu ma ghara iduhie; nkwupụta niile a ga-enwerịrị nkwado.
Zipu okwu bara uru ma kwanyere ya ùgwù? na ndị ọzọ okwu, biko, ọ dịghị spam na ọ dịghị okwu na-anya-isiokwu ma ọ bụ mkparị.
Jiri ezi uche na nkwanye ùgwù zuru oke: dịka ọmụmaatụ, ọ kachasị mma ịrịọ ikikere iji bipụta ma ọ bụ kọọ mkparịta ụka nke ezubere ka ọ bụrụ nkeonwe ma ọ bụ n'ime n'ime [Companylọ ọrụ] Gbaa mbọ hụ na mbọ ị na-agba n’ụzọ doro anya anaghị emebi iwu nzuzo, nzuzo, na ụkpụrụ iwu maka okwu azụmaahịa mpụga.
Nọgide n'ógbè gị nke ọkachamara ma nweere onwe gị ịnye echiche pụrụ iche, nke mmadụ n'otu n'otu na ọrụ ndị na-abụghị nke nzuzo na [Companylọ ọrụ].
Mgbe ị na-ekwenyeghi n'echiche ndị ọzọ, mee ka ọ dabara adaba ma nwee nsọpụrụ. Ọ bụrụ n ’ịchọta onwe gị n’ọnọdụ dị n’ ntanetị nke dị ka ọ bụrụ na ọ na - emegide anyị, adala onwe gị oke ma ghara ịhapụ mkparịta ụka ahụ na mberede: nweere onwe gị ịrịọ onye isi PR maka ndụmọdụ na / ma ọ bụ ịhapụ okwu na mkparịta ụka ahụ. n'ụzọ gosipụtara nke ọma na [Companylọ ọrụ].
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ide ihe banyere asọmpi ahụ, gbaa mbọ hụ na ị na-akpa agwa dị ka diplọma, were mee ka eziokwu mata yana ị nwere ikikere ndị kwesiri ekwesi.
Biko asịtụla ihe ọ bụla metụtara okwu iwu, ịgba akwụkwọ, ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla lọ ọrụ] nwere ike ịgba akwụkwọ.
Etinyela aka na Social Media mgbe enwere ike ịtụle isiokwu a na-atụle ọnọdụ nsogbu. Enwere ike ịchọta nkwupụta na-enweghị aha na adreesị IP gị ma ọ bụ nke [Companylọ ọrụ]. Gaa na Social Media niile gbasara nsogbu nsogbu na PR na / ma ọ bụ Onye Isi Iwu Iwu.
Mara ihe banyere ichebe onwe gị, ihe nzuzo gị, na ozi nzuzo nke lọ ọrụ]. Ihe ị na-ebipụta nwere ike ịnweta ebe niile ma ọ ga-adị ogologo oge, yabụ jiri nlezianya tụlee ọdịnaya ahụ. Google nwere ncheta ogologo.
IHE: A ghaghị ịjụ ajụjụ gbasara mgbasa ozi nke isi na Director of Public Relations.
Tags: ntuziaka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozintuziaka mgbasa ozi mmekọrịtana-elekọta mmadụ media iwu
Feb 8, 2010 na 5:15 PM
Drew edeela ndepụta nke usoro mgbasa ozi Social Media site na ụlọ ọrụ. http://bit.ly/bxKpbP